ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင် ပွဲတော်အစီအစဉ်အားလုံးကို မတ် ၂၁ ရက်ကစပြီး ပိတ်သိမ်းမယ်
ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင် ပွဲတော်အစီအစဉ်အားလုံးကို မ...
18 มี.ค. 2563 - 17:41 น.
ကိုဗစ် -၁၉ ကြောင့် လူစုလူဝေးနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ကျိုက်ထိုမြို့က အထင်ကရ ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်စေတီ ဘုရားပွဲတော်အစီအစဉ်အားလုံးကို မတ် ၂၁ ရက်ကစပြီး ပိတ်သိမ်းသွားမယ်လို့ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သူ ဦးမြင့်သန်းဝင်းက ဘီဘီစီကို အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
'' တောင်တက်ကားတွေရော အဆင်းအတက်အားလုံး မတ် ၂၁ ရက်နေ့မှာ ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန် ဘုရားပွဲတော်အစီအစဉ်ထက် တစ်လခွဲလောက်စောပိတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေရော ဒါတွေ အားလုံးရပ်ဆိုင်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ခြေလျင်တက်ပြီး ဖူးမြော်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ သွားလို့ရပါတယ်''လို့ သူကပြောပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်စေတီတော်ကိုသွားရောက် ဖူးမြော်သူ များပြားလွန်းတာကြောင့် ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းစဉ်တွေနဲ့ သွေဖီနေတဲ့အတွက် ယာယီဆိုင်းငံ့ ထားဖို့ အကြောင်းကြားစာကို ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကနေ အစိုးရအဖွဲ့ကို မတ် ၁၆ ရက်နေ့မှာ ပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက် ပြည်နယ်အစိုးရကနေ အခုလို ပိတ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုး ဂေါပကအဖွဲ့ ပြန်ဖွဲ့မယ်။
ကိုဗစ် -၁၉ ဟာလက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် ကြေညာ ထားတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်တာကြောင့် ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်စေတီကို လာရောက်ဖူးမြော်သူများပြားလွန်းတာကြောင့် ဒီအခြေအနေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေလို့ လွှတ်တော်ကနေ တားမြစ်ရတာ ဖြစ်တယ် လို့ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တင်အိက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
'' ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ကက်ဘိနက်အထူးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို မတ် ၁၇ ရက်မှာ ခေါ်ယူပြီးတဲ့ နောက် အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ အရင်ကတော့ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်တွေကို လတ်တလောမပိတ်သိမ်းဘဲ အပူချိန်တိုင်းတာစတဲ့ ရောဂါကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်တွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အခြေအနေအရပ်ရပ်က ထိန်းချုပ် ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အတွက် မတ် ၂၁ ရက်ကစပြီးပိတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ'' လို့ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သူ ဦးမြင့်သန်းဝင်းကပြောပြပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်ရှိ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေအားလုံးပိတ်သိမ်းရမယ့်အပြင် တောင်တက်ကား အဆင်း၊ အတက် ၂ခုစလုံးကို မတ် ၂၁ ရက်မှာ ရှိတော့မဟုတ်တဲ့အတွက် တောင်ပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဘုရားဖူး တွေအနေနဲ့ မတ် ၂၀ ရက်နေ့ တောင်အောက်ပြန်ဆင်းဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။
' ' ဒီကနေ့ ပဲ တောင်တက်ကားတွေရော၊ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ရော ဈေးဆိုင်တွေ ဟိုတယ်တွေ အားလုံးကို အကြောင်းကြားစာပို့ပြီးပါပြီ။ တစ်လခွဲလောက် စောပိတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့နစ်နာမှုတွေကို အခွန်ဖြေလျှော့တာမျိုးလို မျိုး ဖြေလျှော့တာတွေ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်'' လို့လည်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးမြင့်သန်းဝင်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့မှာတည်ရှိတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင် စေတီတော် ဘုရားပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကနေ ကဆုန်လပြည့်နေ့အထိ (၇)လတာကျင်းပလေ့ရှိပြီး ဒီနှစ်ပွဲတော်ရာသီကို ကိုဗစ် -၁၉ ကြောင့် တစ်လခွဲခန့်စောပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်ကို စနေတနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်မျိုး မှာ တစ်ရက်ကို လူထောင်နဲ့ချီ သွားရောက်ဖူးမြော်လေ့ရှိကြပြီး ပြည်တွင်းက ဘုရားဖူးတွေအပြင် ထိုင်း၊ တရုတ်စတဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေ အများအပြားလည်း လာရောက်ဖူးမြော်လေ့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်ရှင်။
อัลบั้มภาพ ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင် ပွဲတော်အစီအစဉ်အားလုံးကို မတ် ၂၁ ရက်ကစပြီး ပိတ်သိမ်းမယ်